Muraayada Glaze Cake Recipe + Video - Entremet
Waa maxay Cake Muraayadaha Madow?
Muraayada muraayadda muraayadda muraayaddu waa keeg dhalaalaya oo lagu sameeyo shubista glaze sonkorta shukulaatada macaan ee leh gelatin ku jirta keeg barafaysan, oo loo yaqaan 'entremet' (oooh so french). Waxaad isticmaali kartaa midabyo kala duwan iyo wasakhda qaabeysan si aad u sameysid keega la qaboojiyey si aad u hesho dushaas milicsiga sare leh oo ah sida keegga uu ku helay magaca
Keegyadani runti waxay u dhaqaaqeen sidii isbeddel 2017 laakiin waxay umuuqdaan inay halkan joogaan. Mid ka mid ah abuurayaasha ugu caansan keegga muraayadaha muraayadda waa instagrammer @olganoskovaa ka yimid Ruushka Ruushka. Keeggeeda ayaa daawasho wacan leh, kama daali doonno iyaga!
Muxuu yahay muraayadda muraayadda?
Muraayadda muraayadda ayaa laga sameeyaa caano macaan oo macaan, shukulaato yar, biyo iyo gelatin mararka qaarkoodna dhadhan iyo midabbo. Muraayadda muraayadda ayaa dejisa gelatin darteed laakiin ma adka. Waa wax qurux badan oo dheg dheg ah.
Muraayadda muraayadda ayaa leh dhadhan fiican. Waa macaan laakiin aan aad u macaaneyn dhadhankiisuna si wanaagsan ayey ugu milmaan keega iyo buuxinta. Waxay umuuqan kartaa wax yar oo qalaad oo gelatin gelinaya keega laakiin waxay dhadhamineysaa dhadhan fiican!
Cunto fudud oo Muraayad Muraayad ah
Nasiib wanaag annaga, sifeynta muraayadda muraayadda fudud xitaa ma ahan wax adag in la sameeyo. Sida waxyaabaha ugu badan ee laxiriira dubista, waxay qaadaneysaa waxyaabo qaas ah oo gaar ah si aad si buuxda ugu guuleysato baadi goobkaaga muraayadaha indhaha ee muraayadaha indhaha.
Adeegso a shukulaato cadcad oo tayo sare leh leh in ka badan 30% subagga kookaha natiijooyinka ugu fiican
Hubso inaad muraayaddaada dhalaalisid kadib markaad sameysid si aadan u helin wax buro ah oo dhaawacaya dhammaadka
Ku shub dhalaalkaaga saxda ah 90 darajo F. Aad u diiran oo way ka bixi doontaa keegaaga. Aad u qabow oo ma noqon doono mid siman
Hubso in entremet-ka uu barafaysan yahay oo uu ka baxsan yahay qaboojiyaha si markaas uu si dhakhso leh ugu dejiyo gelatin iyo shukulaatada dhalaalka dhalaalaya
Hubso inaad keegaaga dusha ka saarto weelka doolshaha ama muraayadda si dhaldhalaalka uu si dhib yar uga daadan karo.
Cunto Muraayad Midab leh oo Midab leh
Si aad ugu darto midabada muraayaddaada, si fudud ugu bilow sameynta dhalaalka dhalaalka. Qaybta dhalaalka u kala qaad dhawr maddiibadood oo ku midabee iyaga midabaynta cuntada caadiga ah. Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay markaa midabbadaas isku daraan baaquli weyn ama weel ka dibna si dhakhso leh ugu dul shubaan keega la qaboojiyey ama waxay doorbidaan inay midabada midba midka kale ku shubaan oo ay lakab ka dhigaan.
Waxaan adeegsaday isku-darka buluug madow, cows iyo caddaan si aan u sameeyo keegga muraayadda muraayadda ah. Xitaa waxaad baran kartaa inaad sameysato mid kuu gaar ah badda weyn muraayad muraayad glaze ku dhammaystir saamaynta macdan qabow!
wax yar oo madadaalo ah, haddii aad ku darto xoogaa boodh dahab ah oo macdan ah oo aan waligood caddayn ama aalkolo kale oo hadhuudh ah oo aad ku shubto muraayadda muraayadda, waxay keenaysaa xoogaa saamayn wanaagsan! Ha isticmaalin wax badan inkasta oo ama ay cuni doonto dhalaalkaaga.
Muraayad Cake Galaxy
Sameynta keega galaxy waa wax aad u xiiso badan! Tan awgeed waxaan door bidaa inaan isticmaalo muraayad shukulaatada mugdiga ah muraayadda muraayadda kuna dar wax yar oo midabaynta cuntada madow si ay uga dhigto wacnaan iyo mugdi. Kadib isku dheji qaar cad, casaan, guduud, buluug ah ama midabbo aad rabto runtii! Iskusoo wada duuboo qaar ka mid ah rusheeyaha la cuni karo ama dhaldhalaalka muuqaal adduunka ka baxsan oo ka baxsan!
Keegga muraayadda muraayadda muraayaddu runti waa madadaalo oo fudud! Gabadheyda avalon ayaa iga caawisay inaan sameeyo midkaan dhawaan fb live. Kaliya waan jeclahay sida ay dhawaanahan u muujisay xiise dheeraad ah inay iga caawiso dubo, gaar ahaan markay tahay inaan leefleefiyo baaquli.
Muraayada muraayadda muraayadda mooska
Marka sidee dhab ahaantii uga samaysaa mid ka mid ah keega quruxda badan, dhalaalaya?
Ku bilow inaad sameyso mousse Mousse waa farsamo ahaan uun cayn kasta oo ah custard (ama pudding haddii aad ka timid Mareykanka) taas oo lagu fududeeyo kareemka la shiiday. Adiga ayaa iskaa u sameysan kara ama hadaad sideyda oo kale tahay, waxaad kaliya isticmaaleysaa isku darka sanduuqa.
Beddelashada dhadhanka mooska waxay noqon kartaa wax aad u badan! Xitaa waad ku bilaabi kartaa vanilj oo waxaad ku dari kartaa miro shiidan si aad u siiso dhadhan ka duwan sida liin dhanaanta ama miraha xiisaha leh! oohhh fancy.
Sidee loo sameeyaa muraayad muraayad muraayad ah
Waqti aad u fiican ayaan ku qaatay inaan sameeyo maalinta valentines-ka ee muraayadda muraayadda muraayadda muraayadda muraayadda gabadhayda runtiina way ku raaxaysatay cunitaankeeda. Waad aragtaa, guusheeda / guuleysigeedu. Waxaan helayaa daaweyn macaan laakiin ma ahan inaan dareemo dambi inaan cunay waxa oo dhan aniga lafteyda.
Waxaan kariyay qayb ka mid ah shukulaatada suufka shukulaatada ah waxaanan ku laabay kareemo la kariyey. Qiyaastii 1/4 dareere ah ayaa markaa la karbaashay ilaa heer sare. Isku laab illaa inta la isku darayo oo siman.
Ku buuxi caaryadaada qiyaastii 1/3 ee jiirarka. Diyaarso qaar ka mid ah miraha strawberries ama miraha shiidan. Kareem badan oo karbaash ah, ka dibna keegaaga (waxaan kugula talinayaa macaankeena karinta keega vanilj ). Ku shaabad lakab kale oo kareem ah ka dibna barafow!
Waan jeclahay sida keegan quruxda badan uu ugu muuqdo dusha qaar ka mid ah jalaatada dhalaalay oo ay ku hareereysan yihiin miro cusub. Dhab ahaantii, macmacaanka maalinta ee valentines-ka ee aad si fudud kaligaa u sameysan karto.
Muraayadayda muraayadda muraayadda ah ee muraayadda muraayadda ah ayaa ku habboon abuurista dusha sare ee dhalaalaya keega! Ha iloobin inaad yareyso faleebada ka dib marka dhalaalkaagu kuu dejiyo dhammaystir wanaagsan oo nadiif ah.
Hal talo oo dheeri ah, markii aad dhalaalisid keegaaga, ku rid qaboojiyaha dhowr saacadood si aad u jilciso. Qofna ma jecla cunista keegga adag-adag! Keeggan wuxuu sii socon doonaa ilaa 24 saacadood laakiin intaas ka dib, wuxuu bilaabi doonaa inuu lumiyo dhalaalkiisa.
Keeg shukulaato mousse ah oo leh muraayad muraayad ah
Keega muusikada shukulaatada ah maaha habka kaliya ee loo isticmaalo muraayadda muraayadda. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa keega caadiga ah qaboojiyaha cad ee duugga ah ee duugga ah si muraayad muraayad muraayad leh loogu sameeyo qabow. Hubso inay runti runtii runti siman tahay oo la qaboojiyey ugu yaraan saacad ka hor intaadan dhaldhalaalkaas dusha sare saarin.
Markaad dhaldhalaalka gashato, u oggolow keegga inuu ku qaboojiyo qaboojiyaha illaa aad u diyaar garoobeyso inaad ku dhex jeexdo.
Qalabka jikada si aad u sameysid keeg muraayad muraayad ah
Mawduucan waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal xiriir la leh. Akhriso siyaasadayda shaacinta
Heerkulbeegga jikada - Qalab muhiim u ah hubinta in muraayaddaada muraayaddaadu ayan aad u kululayn ama qabow ahayn markaad wax shubayso. Sidoo kale kufiican isticmaalka marka la isticmaalayo shukulaatada!
Muraayadda muraayadda dhalaalka (qalbi siman) - Muraayadda muraayadda caadiga ah ee dhalaalka! Cabbirka saxda ah si loo sameeyo daaweyn dhadhan fiican leh laba.
Muraayadda muraayadda muraayadda (joomatari) - Caaryadan ayaa wax yar ka weyn qalbiga siman waxayna leedahay dhammeystir joomatari. Ku fiican kulamada yaryar sida maydhashada caruusadda ama maalmaha dhalashada!
Cadaadis (Shiine) - Cadaadis aad u fiican oo loogu talagalay soo bixida burooyinka foosha xun iyo kuuskuusyada muraayaddaada muraayadda si aad uguhesho dusha sare, dhammaystiran dhalaalaya dhammaan keegaaga!
Waan isticmaalay Justin Iso muraayadda muraayadda muraayadda si aad u sameyso keegga aan ugu adeegi jiray casharkii 'Ocean Wave Mirror Glaze' isla markaana ay noqotay wax laga naxo!
Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:10 daqiiqado Wadarta Waqtiga:konton daqiiqado Kalori:3346kcal
▢10 oz (297.67 g) Sonkorta dahaaran
▢7 oz (200 g) Caano Macaan oo Macaan
▢5 oz (141.75 g) Biyaha
▢4 tsp (14 g) Budada Gelatin
▢2.5 oz (71 g) Biyaha
▢7 oz (200 g) Shukulaatada Cad (tayo sare leh natiijooyinka ugu fiican sida Valrhona)
▢laba dhibco Midabaynta Cunnada Cad
Ku dar sonkorta iyo tirada ugu horreysa ee biyo digsi dhex-dhexaad ah oo kuleylka kuleylka dhexdhexaadka ah, marmar walaaq.
Ku shub tirada labaad ee biyaha gelatin budada ah kuna qas qaado. U daa inaad si buuxda u nuugto 15 daqiiqo.
Isku dar shukulaatada cad iyo caanaha macaan ee weelka kuleylka weyn
Marka sonkorta iyo biyaha isku dar ah ay bilaabaan inay isku shiishaan (ha karkarin), ka qaad dabka kuna dar gelatin ubaxeed. Walaaq illaa gelatinku uu milmo.
Ku shub dareeraha kulul dusha sare ee shukulaatada iyo caano macaan oo macaan oo ku dhaaf fadhiga 5 daqiiqo inaad dhalaasho.
Adeegso qashin-qashin ama isku-darka isku-darka si aad u kiciso dhalaalka illaa inta uu shukulaatada gebi ahaanba dhalaalay.
Ku dar midabaynta jel kareyso walaaq illaa inta aad isku qasan tahay. Ku dhaji dhaldhalaalka miiraha wanaagsan si aad uga saarto wax burooyin ah. U daa glaze si uu u qaboojiyo.
Marka muraayaddu qaboojiso ilaa 90º F / 32º C, ku shub dusha dabka la qaboojiyey ee ku jira koobka korkiisa, adoo ku fadhiya saxaarad ama saxan gees leh si ay dhibcaha u qabtaan.
Ka tag muraayadda si aad u dhigto 5 daqiiqo ka hor intaadan isticmaalin mindi kulul si aad uga saarto dhibcaha.
Ku raaxayso keegaaga isla markiiba ama qaboojiyaha illaa intaad u adeegayso. Maskaxda ku hay in dhalaalka dhalaalaya uu luminayo iftiinkiisa 24 saacadood ka dib markaa haddii aad tan uga dhigayso macmiil hubi inaad ku shubtay isla maalinta bixinta.
Kalori:3346kcal(167%)|Kaarboohaydraytyada:567g(189%)|Protein:59g(118%)|Dufan:102g(157%)|Dufan Dufan:62g(310%)|Kalastarol:124mg(41%)|Sodium:575mg(24%)|Kalibaalium:1511mg(43%)|Sonkor:566g(629%)|Vitamin A:625IU(13%)|Vitamin C:6.6mg(8%)|Kaalshiyamka:1122mg(112%)|Bir:1.4mg(8%)
bob miiska cas ee saliida gluten free
faraqa u dhexeeya yicibta yicibta iyo marzipan
sida loogu nadiifiyo buluugga khalka
oo ku daboolaya keeg leydi laydi leh
cuntada loogu talagalay keegga cuntada iyo miraha loo yaqaan 'strawberries'